Isikrweqe sangaphandle, iiNdawo zeMiyezo zeGadi yanamhlanje -Piedra
Umfanekiso wobugcisa bentsimbi
Imizobo eyaziwayo ye-Abstract
Umzobo wangaphandle wanamhlanje
Iimpawu zeFiberglass Animal Animal
Imifanekiso eqingqiweyo engaphandle enkulu
ICorten Culpture yeNtsimbi
IPiedra (Xiamen) Sculpture Co, Ltd.
IPIEDRA (XIAMEN) YENKCUBEKO CO, CO. eneemfuno ezizodwa ekwenzeni imifanekiso eqingqiweyo kunye nemifanekiso eqingqiweyo, enje ngemifanekiso eqingqiweyo yesinyithi, imifanekiso eqingqiweyo yobhedu, ukrolo lwamancedo, imifanekiso eqingqiweyo yeflekisi, njl. Le mifanekiso yobhedu kunye nemifanekiso yesinyithi ingasetyenziselwa imifanekiso eqingqiweyo yegadi, imifanekiso emikhulu yangaphandle, umhombiso wodonga lwentsimbi, imihombiso yeeyadi, njl.
Sineqela elinobuchule kakhulu: abaqulunqi / abanobuchule be-3D abanobuchule Umzobo wethu wamakhowa unceda umxhasi wethu wase-USA ukuba afumane ixabiso le-2 kumboniso wezobugcisa odumileyo eMelika, umthengi wase-USA ngoku ngumxhasi wethu wexesha elide, sibeka ii-odolo ezininzi kuthi ngonyaka.
IPIEDRA (XIAMEN) YENKCUBEKO CO, CO. Yenzelwe ukwenza imifanekiso eqingqiweyo kunye nemifanekiso eqingqiweyo, enje ngemifanekiso eqingqiweyo yesinyithi, imifanekiso eqingqiweyo yobhedu, umfanekiso oqingqiweyo, imifanekiso eqingqiweyo yefiloglass, njl .. njl. Ezo zinto zibukhali zobhedu kunye nobugcisa bentsimbi zinokusetyenziswa njengezityholo zegadi, imizobo enkulu yangaphandle, umhlobiso wodonga lwensimbi, imihlobiso yeyadi, njl njl. ..
I-PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD njengenkampani eqingqiweyo yobugcisa kunye nabaqulunqi bethu kunye nefektri, enamava amaninzi ekuqingweni kwemifanekiso yentsimbi, imifanekiso eqingqiweyo yobhedu, imifanekiso eqingqiweyo ye-fiberglass. Sisoloko sinikezela ngeemveliso ezisemgangathweni, ulawulo olungqongqo lomgangatho, eyona nkonzo ilungileyo emva kokuthengisa kubathengi. Ulwaneliseko lwethu sisikhuthazo sakho sokwenza imifanekiso eqingqiweyo engakholelekiyo nenomtsalane.
Enkosi ngemifanekiso eqingqiweyo enkulu osenzele yona kule minyaka. Le mifanekiso iqingqiweyo yentsimbi iyamangalisa ngokwenene kwaye itsale abakhenkethi abaninzi kwigadi yegalufa.
UMbono weSipili oPhakathi oPhakathi
Imifanekiso eqingqiweyo yeHuge Mirror uyilo olwenziweyo, olubonakala njengekhowa elingabonakaliyo. Ubungakanani bukhulu kwaye bu malunga ne-2m ukuphakama okulungele ukubeka ingaphakathi njenge-art yangaphakathi yobugcisa bokuhombisa. Imifanekiso eqingqiweyo ingagcinwa kakuhle ixesha elide kwaye akukho ngxaki ukugcina ngaphezulu kweminyaka engama-50-80. Ke ukuba ufuna imifanekiso yezandla enje ngale, nceda unxibelelane nathi kwangoko. Siza kukubonelela ngexabiso lokukhuphela ireferensi yakho. Amagama akhankanyiwe kwigama lesikhundla: Abstrac ...
Igolide yeentyatyambo engasasebenziyo
Ngaba uyatsaleleka kule Ntyatyambo yentsimbi engenasiseko? Uyilo luyinyani kwaye luyinto entle ukuba ndicinga ukuba le ntyatyambo yentsimbi inokubekwa egadini okanye eyadini njengobugcisa bokuhombisa. Lo mfanekiso mkhulu wesinyithi yenye yezona zinto ndizithandayo kwisikroli esityhilayo. Singakwazi ukwenza ngokwezifiso nasiphi na isikrwele njengemfuno zakho. Iwebhu yethu ineemveliso zohlobo ezahlukeneyo ukuze ukhangele ukuba zibhekisele kuzo. Iinkcukacha Sculpture Ubugcisa bemihla ngemihla bokuhombisa egadini Imifanekiso eqingqiweyo eyenziwe ngesazobe NO ...
Imifanekiso eqingqiweyo enkulu yangaphandle engenasiseko ...
Ngaba wothukile yile nto enkulu engenagwele yentsimbi? Ifakwe kwindawo yengca, e-USA. Esi sikrwecwa samakhowa sifumene indawo yesibini kwimiboniso bhanyabhanya odumileyo wase-USA phakathi kwemifanekiso eqingqiweyo engama-50.Ungazibona usemhlabeni, kuba wenziwe kumphezulu wesipili onomphezulu omkhulu welding kunye nokubaza. Eyilwe njengobume be-mushroom, iyamangalisa xa uyibona apho. Kwaye abathengi bethu bamanye amazwe banombulelo omkhulu kulo mfanekiso omkhulu wangaphandle. Kutheni ungayikhethi njengegadi yakho okanye iyadi ...
Isibonisi sangaphandle somboniso wemiboniso
Umzobo ongaphandle mkhulu ngokwenene onokuthi ugcinwe njengomhombiso wangaphandle, njengokuhonjiswa kwesikwere, umhombiso wobugcisa nokunye. Uyilelwe imilo yeqhude, lityutywe ngesiphumo sesibuko kunye nombala wegolide. Kwaye yahlukile ngombala oqhelekileyo wegolide, lo mfanekiso oqingqiweyo unombala wegolide ocacileyo ukuze ubone umzobo obonisa isithunzi apha. Kodwa umbala oqhelekileyo wegolide awukwazi kubona isithunzi. Ukuba kukho imifanekiso eqingqiweyo yegadi yesinyithi enomdla kuwe, nceda uzive ukhululekile ukusithumela nge-imeyile ku-sales1 @ b ...
Yintoni ubugcisa bensimbi
Umzobo wobugcisa wensimbi udlala indima engenakuphinda yenzeke kuyilo lwendawo kunye nomhlobiso. Ukuhonjiswa kwesinyithi sesinyithi kungafakwa indawo kawonkewonke okanye indawo yangaphakathi, kwaye nako kusetyenziswe kwindawo yemveli. Siyazi imifanekiso eqingqiweyo yentsimbi ibandakanya ezinye iintlobo ezinje ngesando sesinyithi, ...
Kutheni isetyenziselwa ubhedu kwimifanekiso eqingqiweyo
Isithsaba sobhedu sinalo ixesha elide elinokuthi ligcinwe kwaye ligcinwe ngcono ngaphezulu kweminyaka engamakhulu. Xa kuthelekiswa nezinye izinto eziqingqiweyo, umfanekiso wobhedu nawo unembali ende, akunjalo? Siyazi ukuba ukukrola umfanekiso wobhedu kunokwenziwa, umfanekiso njl.njl, njl.
Ngaba intsimbi yecorten iyaweldeka?
I-Corten yensimbi okanye i-Weathering iron luhlobo olukhethekileyo lothotho lwe-alloy yensimbi ephantsi phakathi kwesinyithi kunye ne-carbon yensimbi eqhelekileyo. Inokungqubana kokungqubana komoya womhlaba kunye nenqaku lokudibanisa ngaphezu kwensimbi yesiqhelo yecarbon, kwaye ixabiso linoqoqosho ngakumbi kunentsimbi engenasici. Iplate yecorten y ...
Ifowuni + 86-13950080662
Idilesi Igumbi 1407, Changan Bldg, No. 75-77 Lvling Road, Isithili Huli, Xiamen, 361009, Fujian, China